Sadaasaa 05, 2021
Gaanfa Afrikaatti Jiila Adada Yunaaytid Isteets Jefrii Feeltiman (suuraa faayilii)
Yemmuu wal waraansii kaabaa Itiyoophia baballachaa fi hammaachaa deemaa jiru kanatti gaanfa Afrikaatti Jiili addaa U.S Jefrii Feelt maan Itiyoophiyaa deemuudhaan hangaa’ota mootummaa Itiyoophiyaa waliin marii taasisaa jiru.
Dubbi himaan ministeeraa dhimma alaa U. S Niid Praayis akka jedhanitti, Jefrii Feelt maan, Itti aana muummee ministeeraa fi ministeeraa dhimma alaa Itiyoophiyaa Demeqe Mekonnen, Ministeeraa ittisa biyyaa Dr. Abrihaam Belaa, akkasumas Ministeraa maallaqaa Ahmed shiidee wajjin marii taasisaniiru.
Waa’ee marii taasifamaa jiruu baldhinaan wantti ibsamee jiraachuu baatus , akka Niid Praasi jedhanitti wal loliinsi adeemaa jiru akkaataa dhaabbuuchuu ganda’uuf karaa barbaachuudhaaf.
Karaa biraatiin Dubbi himtuun waajira muummee ministeeraa Itiyoophiyaa Biillene Suyyum fi Abban alaangaa mootummaa federaalaa Dr. Gediyoon Ximotiwoos haala yeroo irratti guyyaa har’aa ibsa kennaniiru.
Ibsa kana irratti Jefrii Feelt maan muummee ministeeraa Itiyoophiyaa wajjin wal arganii haasa’uu ? jedhamee gaaffii dhihaateef dubbi himtuu Biillenee suyyum deebii kennaniin, amma ammaatti gaafiin dhihaatee fi sagaantaan qabamee akka hin jirre himaniru.
Ministira Haqaa Itoophiyaa Geediyoon Ximootiyos fi Dubbii himtuu muummee ministira Itoophiyaa Billenee Siyyum
Ibsaa gaazexeessotaaf karaa marsaaritin kenname kana irratti , yemmuu gareewen mootummaan wal waraanaa jiran magaalaa gudditti biyyatii irraa kiiloomeetirii 300 irra jiran kanatti mootummaan yoo gara mariitti deema ta’e wantii inni ta’uu qaba jedhu maal akka ta’e gaafii dhihaateef Dr. Gediyoon Ximootiyoos deebii kennaniiru.
Akka Dr. Gediyoon jedhanitti, marii karaa nagaa jalqabuudhaaf yoo xinnate Addi Bilisummaa Ummata Tgiraay loltoota isaa naannoolee Amaaraati fi Affaar keessaa baasuu qaba.
Itti aansuudhaan hokkora ykn wal waraansa balaaleffachuu qaba.
Mootummaan U.S dhiheenya kana waligaltee daldalaa qaraxa irraa bilisa ta’e isaa "AGOA" jedhamee beekamuu haquu ishee beeksiftee jirti.
Dhimma kana irratti gaaffii Dihaateef Dr. Gediyoon Ximootiyoos Deebii kennaaniin, waligalteen sun haqamuun isaa lammiilee Itiyoophiyaa 200,000 ol ta’an akka miidhu ibsanii wali galtee sana bakkatti deebisuudhaaf akka irratti hojjachatamaa jiru himaniiru.
Yemmuu Jefrii Feelt maan Itiyoophiyaa keessatii marii irra jiran kanatti ministeerri dhimma alaa U.S Antoonii Biliinken fuulaa tiwuterii isaanii irratti jimaata har’aa yaad kennaniin,
hookkorri Itiyoophiyaa keessa jiru dirqama dhaabbachuu qaba. Mariin karaa nagaa hatattamaan jalqabamuu qaba. Dhukaassin haal duree kamiinuu malee dhaabbachuu qaba jedhaniiru.
Dhalattoonni Tigraaay Kamisa Kaleessaa Washington Keessatti Hiriira Geggeessan
Barattoota Yunivarsitiileedhaa Eebbifaman Rakkoon Hojii Dhabummaa Isaan Mudatu Hammaachaa Deemuu Dubbatu
Magaalaalee Oromiyaa Keessatti Har’a Hiriirri Deggersa Waraana Ittisaa Geggeessame
Xiinxala Labsii Yeroo Muddamaa Itiyoophiyaa
Naayjeriyaa Keessatti Namoonni Butaman Baraarsamanii Jiru
Mareen Waa’ee Sudaan Foyya’insa Agarsisuun Ibsamee Jira